Jawi waxbarasho waa in ardayda oo dhan ay heli karaan. Si carruurta, dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee u baahan taageero ay u helaan fursado waxbarasho oo u dhigma waxaa loo baahanyahay aqoon ku aaddan helitaan.
Waxaa ay tusaale ahaan ka dhignaan kartaa in dugsigu uu siiyo ardayda oo dhan fursado ah in wax la akhriyo, la qoro laguna xisaabiyo hadba qof duruuftiisa. In barayaashu ay istaraatiijiyad leeyihiin sidii waxbaridda iyo qalab waxbaridda laysu waafajin lahaa. Waxaana jira aqoon xagga ka qeyb qaadashada, qaabilaadda, qalab kale, helitaan jir ahaaneed iyo hawlo waxqabad oo jir ahaaneed oo nidaamka dugsiga ah.
Waxaannu nahay dhinac iskaashi
Dugsiyada xannaanada iyo barbaarinta carruurta, dugsiyada ama waxbarashada dadka waaweyn waa ay nala soo xiriiri karaan si ay u helaan talo bixin ku aaddan arrimaha habka waxbaridda gaarka ah. Waxaannu caawineynaa awooddeenna xirfadeed annagoo wada shaqeyn la sameyneyna degmooyinka ama dugsiyada xurta ah ee xannaanada iyo barbaarinta carruurta iyo dugsiyada. Taasi waxaa ay dhaceysaa annagoo mareyna hawlaheenna goballada ee shanta ah. Mar marka badankooda waxaa talo bixin ku aaddan habka gaarka ah ee waxbaridda nasoo weydiiyo mas'uulka dugsiga ama kooxda shaqo. Su'aaluhu waxaa ay ku saabsanaan karaan istiraajiiyooyinka habka waxbaridda iyo habka la macaamilidda, natiijooyinka la xiriira habka waxbaridda ee naafanimada ama aqoon kororsi. Mar marka kalana waxaa ay noqon kartaa in aan annagu billawno tallaabo kulan yeelasho si aannu uga doodno baahida degmooyinka ama dugsiga ee xagga taageerada habka waxbaridda gaarka ee waqtiga fog.
Waxaan xitaa bixineyna aqoon kororsi lacag la'aan ah. Koox bartilmaameed muhiim u ah koorsooyinkeenna, waxbarashooyinka fogaalka ah, shirarka, siminaarrada iyo siminaarrada intarneedka waa barayaasha iyo hoggaanka dugsiyada. Taageerada aannu tala bixinta arrimaha habka waxbaridda gaarka ah ku bixineyno waxaa ay khuseeyaan qaababka dugsi oo dhan si waafaqsan cutubka 1. Qodobka 1 ee sharciga dugsiyada.
Taageero dheeraada oo uu la socdo baaritaan la xiriira habka waxbaridda gaarka ah
Xarumaheenna qaran ee kheyraadka ayaan ku fulineynaa khariiddadeyn iyo baaritaanno la xiriira habka waxbaridda gaarka ah. Taas waxaa sameynaya koox leh awoodo xirfadeed oo kala duwan oo la shaqeynaya barayaal ka socda dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta ama dugsiga iyo shakhsiyaad kale oo canugga ama ardayga ku hareereysan. Xarunta kheyraadku waxaa ay xitaa waaliddiinta u soo bandhigeysaa koorsooyin.
Xarunta kheyraadku waxaa ay qaabileysaa carruur iyo arday leh:
naafanimo xagga indhaha ah, ha la socoto naafanimo kale ama yaaneey la soconnine.
Jiha wareer culus oo xagga luqadda ah
naafanimo xagga maqalka ah oo uu la socoto kala dhantaalmid xagga koritaanka ah iyo ama autism iyo
dhego-indho la'aan lala dhashay/dhakhsi ku timid.